Ilay fahamarinana tonga nofo
"Izao no nahaterahako, ary izao no nihaviako amin'izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko" - Jao. 18:37.
Ny fahambonian'i Kristy, eny fa na dia nidina tsikelikely teo amin'ny lalan'ny fahafaham-baraka aza Izy, no nanome hery mahagaga ny teny nolazainy. Akory ny halehiben'ny lesona nomeny, ary Akory ny halehiben'ny fahefany sy ny haavon'ny toerany raha nanameloka ny fahotana Izy. Ho Azy, ny fahamarinana dia fahamarinana, ary tsy nampandeferiny na oviana na oviana izany; satria Izy no loharanon'ny fahamarinana. "Izao no nahaterahako", hoy Izy, "ary izao no nihaviako arnin'izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina". (...) Izy no fahamarinana sy fahamarinana tonga nofo. Izy no ilay niara-nanapaka tamin'Andriamanitra, Ilay nitoetra tao amin'ny fitoerana masina indrindra izay an'i Jehôvah, no nilaza izay fantany (...) Tsy nahatakatra ny tiany hambara anefa ireo olona nilaza fa nanam-pahalalana be sy nanana fahatakarana avo ny zava-panahy. Ary sahin'izy ireo nokianina sy nomelohina noho ny tsi-fahalalany izay novolavolain'ny Ray sy ny Zanaka hatramin'ny voalohany.
Mitaona mandrakariva ny olona rehetra ho eo Aminy i Kristy voahombo. Etsy an-daniny, i Satana koa miezaka misintona ny olona hanalavitra an'i Kristy mba tsy hahafahan'izy ireo mandeha eo amin'ny fahazavan'ny tavany. Sintoniny koa ireo mba tsy hahitan'izy ireo an'i Kristy araka ny fahatsarany sy ny famindrampony, ny fangorahany mandrakizay sy ny fitiavany tsy manam-paharoa. [...] Tonga teto an-tany anefa i Kristy mba tsy ho very izay rehetra mino Azy. Mitodika any amin'ny masoandro ny voninkazo mba handray ny tarany mazava izay hanampy ilay voninkazo hanana fahatsarana sy fivelarana tanteraka. Tahaka izany koa no tokony itodihan'ireo mpanara-dia an'i Kristy any amin'ilay Masoandron'ny fahamarinana, mba hamirapiratra eo amin'izy ireo ny fahazavan'ny lanitra. Izany fahazavana izany no hahatanteraka ny toetr'izy ireo, sy hanome azy ireo fanandramana lalina sy maharitra ny zavatra momba an'Andriamanitra. Tsy hain'ny saintsika takarina ny fitahiana izay atolotra antsika amin'ny alalan'i Kristy raha mampiray ny ezak'olombelona amin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika. — YI, 22 Septambra 1898